ကုန်ကြမ်း IDFP ပေးသွင်း (615250-02-7) hplc≥98% | AASraw
/ ထုတ်ကုန်များ / အဆီဆုံးရှုံးမှုအမှုန့် / IDFP (615250-02-7)
rating: SKU: 615250-02-7. အမျိုးအစား: အဆီဆုံးရှုံးမှုအမှုန့်
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ IDFP (615250-02-7) ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့်မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
သိုလှောင်မှုကို Temp: -20 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
IDFP (615250-02-7) သံသရာ
ဓာတုအမည်များ: ISOPROPYL DODECYLFLUOROPHOSPHONATE
IDFP (615250-02-7) အသုံးပြုမှု
IDFP အာရုံကြောအေးဂျင့် sarin နှင့်ဆက်စပ်သောတစ်ခု organophosphorus ဒြပ်ပေါင်းများဖြစ်ပါတယ်။ sarin ကဲ့သို့ပင် IDFP ပုံမှန် neurotransmitters ဆင်းချိုးဖျက်ဖို့အစေခံကြောင်းကွဲပြားခြားနားသောအင်ဇိုင်းတွေများစွာများအတွက်နောက်ကြောင်းပြန်မလှည် inhibitor ဖြစ်ပါသည်, IDFP ၏သို့သော်ရှည်လျား alkyl ကွင်းဆက်သာ 50nM တစ်ခု IC6300 အတူ acetylcholinesterase (နာ) ၏တစ်ဦး inhibitor အဖြစ်ကသိသိသာသာအားနည်းစေသည်, နေစဉ် က monoacylglycerol lipase (MAGL), အ endocannabinoid 2-arachidonoylglycerol (2-AG က) လျော့နည်းသွားစေဘို့တာဝန်ရှိမူလတန်းအင်ဇိုင်းများနှင့်ဖက်တီးအက်ဆစ်များကြားတွင် hydrolase (FAAH), အခြားအဓိက endocannabinoid anandamide degrades သောမူလတန်းအင်ဇိုင်းနှစ်ခုအင်ဇိုင်းတွေ၏ inhibitor တစ်အစွမ်းထက်ဖြစ်ပါသည် ။ IDFP ၏ IC50 FAAH မှာ MAGL မှာ 0.8nM နှင့် 3.0nM ဖြစ်ပါတယ်။ နာမှာအာနိသင်၎င်း၏မရှိခြင်းအဘယ်သူမျှမ cholinergic လက္ခဏာတွေထုတ်လုပ်နေကြပြီးဆိုလိုသည်စဉ်ကဤနှစ်ခုကိုအင်ဇိုင်းတွေ၏တားစီး, inincreased cannabinoid အချက်ပြနှင့်တိရစ္ဆာန်လေ့လာမှုများအတွက်ပုံမှန် cannabinoid အပြုအမူသက်ရောက်မှုရလဒ်သည်ဦးနှောက်အတွင်းရှိ anandamide နှင့် 2-AG ကနှစ်ဦးစလုံး၏သိသိသာသာတိုးမြှင့်အဆင့်ဆင့်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ [1 ]    ကပိတ်ပင်ထားအာရုံကြောအေးဂျင့်မှ၎င်း၏အလားတူဓာတုဖွဲ့စည်းပုံနေသော်လည်း IDFP ၏ရှည်လျားသော alkyl ကွင်းဆက်  ကဓာတုလက်နက်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်အောက်မှာ "အဆိပ်သင့်ဓာတုပစ္စည်း" ၏အဓိပ္ပါယ်အပြင်ဘက်လဲဖြစ်ပေါ်စေသည်နှင့်အပြီးကတည်းက ဒါကြောင့်လည်း IDFP အတူတူပင်တင်းကြပ်ဥပဒေရေးရာထိန်းချုပ်မှုမှဘာသာရပ်မဟုတ်ပါဘူး, ဆက်စပ် organophosphorus ဒြပ်ပေါင်းများ၏အစွမ်းထက်နာတားစီးပြမထားဘူး။
ရေရှည်သိုလှောင်မှုအတွက်ကျနော်တို့ -20 ℃မှာထောက်ပံ့အဖြစ် IDFP သိမ်းဆည်းထားစေခြင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဒါဟာကအနည်းဆုံးတစ်နှစ်တည်ငြိမ်ဖြစ်သင့်သည်။
IDFP methyl acetate အတွက်ဖြေရှင်းချက်အဖြစ်ထောက်ပံ့နေသည်။ အဆိုပါအရည်ပျော်ပစ္စည်းကိုပြောင်းလဲစေရန်, ရိုးရိုး nitrogenand ၏နူးညံ့သိမ်မွေ့စီးအောက်ရှိ methyl acetate အငွေ့ပျံချက်ချင်းထိုကဲ့သို့သောအာဂွန်ဓာတ်ငွေ့နှင့်အတူပြေတတ်အီသနော, DMSO နှင့် dimethyl formamide အဖြစ် choice.Solvents များ၏အရည်ပျော်ပစ္စည်း add ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဤအပျော်ရည်များ IDFP ၏နိုင်မှုခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 10mg / ml ဖြစ်ပါတယ်။
aqueous စတော့ရှယ်ယာဖြေရှင်းချက်ဇီဝစမ်းသပ်ချက်အဘို့လိုအပ်သည်ဆိုပါကအော်ဂဲနစ်ပျော်ရည်နိမ့် concentrations.We do မှာဇီဝကမ္မသက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါကတည်းကသူတို့အကောင်းဆုံး, aqueous ကြားခံသို့မဟုတ် organicsolvent ၏ကျန်နေတဲ့ငွေပမာဏကိုအရေးကြောင်း isotonic saline.Ensure သို့အော်ဂဲနစ်အရည်ပျော်ပစ္စည်း diluting ကပြင်ဆင်နိုင်ပါသည် တစ်ဦးထက်ပိုသည်နေ့ရက်သည် storingthe aqueous ဖြေရှင်းချက်အကြံပြုမဟုတ်ပါဘူး။
ဘယ်လို IDFP အကျင့်ကိုကျင့်
IDFP ပုံမှန် neurotransmitters ဆင်းချိုးဖျက်ဖို့အစေခံကြောင်းကွဲပြားခြားနားသောအင်ဇိုင်းတွေများစွာများအတွက်နောက်ကြောင်းပြန်မလှည် inhibitor ဖြစ်ပါတယ်ကြောင့် monoacylglycerol lipase (နှစ်ခုအင်ဇိုင်းတွေ၏ inhibitor တစ်အစွမ်းထက်နေစဉ်, IDFP ၏သို့သော်ရှည်လျား alkyl ကွင်းဆက်, acetylcholinesterase (နာ) ၏တစ်ဦး inhibitor အဖြစ် itdramatically အားနည်းစေသည် MAGL), အ endocannabinoid 2-arachidonoylglycerol (2-AG က), နှင့်ဖက်တီးအက်ဆစ်များကြားတွင် hydrolase (FAAH), အခြား mainendocannabinoid anandamide degrades သောမူလတန်းအင်ဇိုင်းလျော့နည်းသွားစေဘို့တာဝန်ရှိမူလတန်းအင်ဇိုင်း။ တစ်ဦး organophosphorus ဒြပ်ပေါင်းများ, 50 မှာ respectively.0.8 / ကီလိုဂရမ် MG3နှင့် 1 nm ၏ IC10 တန်ဖိုးများနဲ့ dually တားစီး MAGL နှင့် FAAH, IDFP ပိုပြီး 2-ခွံထက် 10-AG ကနှင့် AEA ၏ဦးနှောက်အဆင့်ဆင့် elevates နှင့်ဖွငျ့ arachidonic အက်ဆစ်၏အဆင့်ဆင့်လျော့ကျ 10-ခြံ။
ဒီထုတ်ကုန်လူ့သို့မဟုတ်တိရစ္ဆာန်ဆေးကုသရေးအသုံးပြုမှုအတွက်မဟုတ်ပါဘူး, ပိုမိုသတိပေး Research ဆဲဖြစ်ပါတယ်။ တိုက်ရိုက်အသားအရေနှင့်အဆက်အသွယ်, မျက်စိ, အသက်ရှူလမ်းကြောင်း, မအီရှောင်ကြဉ်ပါ, ချက်ချင်းသင့်ဆရာဝန်ကိုခေါ်ပါ။
IDFP (615250-02-7) ရော် Powder
ဆားနဲ့ရေချိန်ခွင်လျှာ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ရေရှည်သွေးဖိအားကိုထိန်းချုပ်ဘို့အရေးပါစဉ်းစားအဆိုပါကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာ medulla, anandamide နှင့်၎င်း၏အဓိကဇီဝြဖစ်အင်ဇိုင်းတွေနှစ်ခုအတွက်ကြွယ်ဝပြည့်စုံသည် cyclooxygenase-2 (Cox-2) နှင့်ဖက်တီးအက်ဆစ်များကြားတွင် hydrolase (FAAH) ။ C15BL / 30J ကြွက်များ၏ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာ medulla သို့ anandamide (60, 1 နှင့် 1 nmol ·မိ-57 ·ကီလိုဂရမ်-6) ၏ပြုတ်ရည်တစ် Cox-2- အတွက် diuresis နှင့်ဆားမစင်နှိုးဆွပေးပေမယ့် Cox-1-မှီခိုမဟုတ်ထုံးစံ။ ယင်းကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာ medulla အတွက် endogenous endocannabinoids အလားတူအကျိုးသက်ရောက်မှုများထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်, နှစ်ခုအဓိက endocannabinoid hydrolases ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်ရာ intramedullary isopropyl dodecyl fluorophosphate (IDFP) ၏သက်ရောက်မှုလေ့လာခဲ့ကြသည်။ IDFP ကုသမှု Cox-2-မှီခိုထုံးစံတစ်ခု Cox-1- အတွက်ဆီးဖွဲ့စည်းရေးမှုနှုန်းနှင့်ဆိုဒီယမ်မစင်တိုးမြှင့်သော်လည်းမ။ anandamide မဟုတ်သလို IDFP မ glomerular filtration နှုန်းကိုထိခိုက်ခဲ့သည်။ စနစ်တကျ (0.625 မီလီဂရမ်·ကီလိုဂရမ်-1 · 30 မိ-1 ဃ) မဟုတ်သလို intramedullary (15 nmol ·မိ-1 ·ကီလိုဂရမ်-1 ·မိ-30 1) IDFP pretreatment intramedullary anandamide (15-30 nmol မတိုင်မီ·မိ-1 ကိုမ· ကီလိုဂရမ်-1) တင်းကြပ်စွာ anandamide ၏ Hydrolysis ယင်း၏ Diuretics ဆီးအကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်လိုအပ်သောမဟုတ်ခဲ့ကြောင်းအကြံပြု, anandamide ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများပိတ်ဆို့။ Intramedullary IDFP ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာသွေးစီးဆင်းမှုအပေါ်မပါအကျိုးသက်ရောက်ခဲ့ပေမယ့်ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာ medullary သွေးစီးဆင်းမှုနှိုးဆွ။ သရုပ်ပြအဖြစ်ဆီးစီးဆင်းမှုနှုန်းသည်နှင့် medullary သွေးစီးဆင်းမှုအပေါ် IDFP ၏သက်ရောက်မှု FAAH နောက်ကောက်ကြွက်ကိုအသုံးပြုပြီး FAAH-မှီခိုခဲ့ကြသည်။ HPLC-electrospray သည် .ionizer တွဲဖက်အစုလိုက်အပြုံလိုက် spectrometry အားဖြင့်မောက်စ်ဆီး PGE2 ပြင်းအား၏ analysis IDFP ကုသမှုဆီး PGE2 လျော့နည်းသွားကြောင်းပြသခဲ့သည်အဲဒီဒေတာ FAAH နှင့်ထဲမှာ diuresis နှင့်ဆားမစင်ကိုထိန်းညှိဖို့ Cox-2-မှီခို metabolite မှတဆင့်သရုပ်ဆောင် endogenous anandamide တစ်အခန်းကဏ္ဍနှင့်ကိုက်ညီများမှာ mousekidney ။
AASraw ထံမှ IDFP အမှုန့် (615250-02-7) ဝယ်ဖို့ကဘယ်လို
Synephrine HCL အမှုန့်
Lorcaserin HCL အမှုန့်
အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက် Cetilistat ကုန်ကြမ်းအမှုန့်
ခံတွင်း turinabol အမှုန့်: သင် Steroid တစ်မျိုးအမှုန့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုသိသလား?
Nandrolone decanoate ဆေးထိုး၏အသုံးပြုမှုကိုကဘာလဲ?
ရာခိုင်နှုန်း Letrozole ကုန်ကြမ်းအမှုန့်-ငါးခုငါသိရှိရမည်သောအရာတို့ကို !!!